1. Imbali yakho kusuka ekuqaleni futhi ngaphandle kwe-franchise.
Usiqala kanjani isitolo sakho sezimbali kusuka ekuqaleni futhi ngaphandle kwe-franchise. (Incwadi ka-A.A. Elcheninov)
Umqondo wokuvula isitolo sakhe sezimbali uvakashele kaninginingi umuntu onentshisekelo ye-floristry osekukhule waba ngumsebenzi wobuchwepheshe ngothando olulula lwezimbali. Yilokho engangihlale ngiphupha ngakho.
Emuva ngama-90s, nginqume ukuqala ibhizinisi lezimbali futhi ngavula idiyoski lami lokuqala lezimbali. Umqondo ube yimpumelelo, futhi ngokuhamba kwesikhathi kungenzeka ukuphinda impumelelo ngesitolo e-USA. Ngokushesha, ngase nginezindawo ezimbalwa ezazingenisa imali enhle. Ngicabanga ukuthi isipiliyoni sami sokuqhuba ibhizinisi elincane eliphumelelayo sizosiza abaningi. Kule bhulogi eku-inthanethi, ngizodalula izimfihlo ezimbalwa zokuthi ungasivula kanjani isitolo sakho esincane esiletha injabulo ngemisebenzi oyithandayo nemivuzo yemali yomsebenzi wakho.
Ngikwenze kanjani? Okokuqala, kwaba khona isifiso esikhulu nokukholelwa emandleni akho. Okwesibili, thanda engikwenzayo. Okwesithathu, isifiso sokwakha ukuhlelwa kwembali kwe-whimsical kwe- ukulethwa kwezimbali nokuthengisa ngaphakathi kwezindonga zesitolo, isifiso sokubona imibono yabo yokudala bese wabelana ngayo nabanye. Ukuphikelela kwami ​​ekunqobeni ubunzima, ukomela ukuthola engikufunayo, kwangisiza ngathola impumelelo. Ngiyashesha ukuhlanganyela nawe ulwazi lokusuka ephusheni uye ekuvuleleni ibhizinisi lakho lezimbali.
Njenganoma yikuphi okunye ukuzilibazisa, uthando lwezimbali ludinga ukutshalwa kwemali futhi kuthatha isikhathi eside. Kancane kancane, kuphenduka umkhuba, imisebenzi yansuku zonke iba yinto ejwayelekile, umuzwa wobusha ulahlekile. Le nqubo ayinakugwenywa, ihlala kuphela ukuze yamukele isimo. Kepha ingxoxo ayikho ngalokho.
Kancane kancane, intshisekelo elula ku-floristry iphenduka inkanuko yangempela, evusa inkanuko, eheha futhi ithathe ngokuphelele ngaphandle kokulandela. Amalungu omndeni awahlali kude nale nqubo. Imbali imilingo iheha wonke umuntu okungenani othintekayo ngandlela thile kule nqubo. Ukubandakanyeka akunakugwenywa futhi kungekudala wonke amalungu omndeni alwela ukusebenzisana ukuze akhe inhloso efanayo.
Udinga ukuzilungiselela ukushintsha yona kanye indlela yokuphila. Noma ngubani onqume ukuvula ibhizinisi lezimbali usevele unolwazi oluncane oluhlobene ne-floristry. Kunoma ikuphi, isifiso sokuthengisa izimbali asiveli ngokuzumayo, noma lokhu kungenzeka. Kepha ezimweni eziningi lokhu kwehlukile kunomthetho. Ngaphezu kwalokho, izikhathi lapho ukuthengiswa okulula kwezimbali kwaletha inzuzo enkulu sekudlule isikhathi. Imakethe yezimbali yesimanje igcwele izimpahla ezahlukahlukene, futhi yona ayisabangeli isasasa nentshisekelo engacabangeki. Abantu bakhangwa yinsizakalo egxile kumakhasimende, indlela yomuntu ngamunye. Wonke la maphuzu kufanele anakwe, futhi ukuthengisa kuhlelwe kahle.
Ekhasini elilandelayo -> 1.2. Imbali yakho kusuka ekuqaleni futhi ngaphandle kwe-franchise.
I-Eustoma (iLisianthus, iJapan rose) - ama-5 ama-PC.
I-rose-enekhanda elilodwa - ama-11 ama-PC.
Isixha esikhanyayo sama roses ne-eustoma.
3200 XNUMX ₽ Inqwaba yezimbali 5
I-Eustoma (iLisianthus, iJapan rose) - ama-20 ama-PC.
I-Ruscus - ama-20 ama-PC.
Peony rose - 60 pc.
Iribhoni - 4 pc.
27952 XNUMX ₽ Композиция "ДУЭТ"
Ihlobo lisenza sijabule ngama-daisy!) Sizama ukuxhumana ngaso sonke isikhathi futhi nganoma isiphi isikhathi ukuba semnyango womthandi wakho ngesixhumi sezimbali zama-daisy zensimu .. Sikhetha okuhle kakhulu kokuhle kakhulu kokuhle kakhulu! Sisebenza ngqo kumhlinzeki ngakho-ke sihlala sinezimbali ezintsha sha!)
3420 XNUMX ₽ Ama-daisy angama-25
IPistachio - 6 pc.
Izimbali zezimbali ezibomvu zakudala ezinemibala eluhlaza ephepheni lesimanje lobuciko. Isiphundu ngasinye sishaya ngobuhle baso nangokusha. Isimbali esinjalo singaba isimemezelo esihle kakhulu sothando noma isibonakaliso senhlonipho ejulile.
3156 XNUMX ₽ Ibhikiseli
I-mono-bouquet entekenteke yama-roses ayi-15 akudala ngokufakwa kwendawo eluhlaza.
5775 XNUMX ₽ Isixha sama-rose angu-15 okhilimu
Ukwakhiwa: I-Orchid cymbidium (insimbi) ama-PC ama-25., I-Salal 15 PC.
12475 XNUMX ₽ Inqwaba yezimbali ze-Orchid 3